Mabhureki 1.11 ikozvino inoenderana zvizere neGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Adobe kambani uye yese timu iri kumashure kweBrackets yakaburitsa vhezheni nyowani yekodhi yavo edhita yevagadziri vewebhu. Mabhureki 1.11 ndiyo itsva vhezheni yemupepeti uyu kuti kunyangwe ichizivikanwa pasi, padiki nepadiki pari kuitwa pakati pezvishandiso zvevagadziri vewebhu.
Chinhu chinonyanya kushamisa nezveMabhureki 1.11 kufarira kwayo kuGnu / Linux. Kuva vhezheni inotarisa pane ino inoshanda system pamberi pemamwe masisitimu, ayo aripowo.
Kwenguva yakareba Mabhureki anogona kuiswa paGnu / Linux masisitimu anoshanda, asi zvakasiyana nedzimwe shanduro dzechirongwa chimwe chete, iyo Gnu / Linux vhezheni yakanga isina zvese zvekuvandudza izvo mune mamwe masisitimu anoshanda seWindows kana macOS.
Mabhureki 1.11 ine kusangana kwakazara mukati meGnu / Linux
Mabhureki 1.11 muAdobe kambani muparidzi. Kunyangwe iri yemahara uye yakavhurika sosi mupepeti, iri software ndeyaAdobe uye nekudaro kushandiswa kwayo isingazivikanwe sevamwe vanyori vekodhi senge Sublime Chinyorwa kana Atomu.
Nekudaro, ayo mashandiro ewebhu kusimudzira akawandisa zvekuti vanogadzira webhu eimwe anoshanda masisitimu vanoishandisa iko kukura kwavo. Pamwe izvozvi mabhureki ane mamwe mabasa seawo mamwe mavhezheni, vagadziri vewebhu vachishandisa Gnu / Linux vachashandisa iyi kodhi mhariri.
Chero zvazvingaitika, kana iwe uchida kuyedza chirongwa ichi, unogona kuwana yayo yekuisa package kubva iyo yepamutemo webhusaiti kubva pachirongwa kana kuwana kodhi yacho kubva ku github repository yechirongwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Mabhureki 1.11 ikozvino inoenderana zvizere neGnu / Linux
Krita 3.3 yakaburitswa yeLinux